छिमेकी गाइडहरू: डाउनटाउन LA बारे तपाईंलाई थाहा नहुन सक्ने १० कुराहरू
घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » गेस्टपोस्ट » छिमेकी गाइडहरू: डाउनटाउन LA बारे तपाईंलाई थाहा नहुन सक्ने १० कुराहरू
पछिल्ला दुई वर्षहरूमा, डाउनटाउन लस एन्जलसको धारणा नाटकीय रूपमा परिवर्तन भएको छ।
नयाँ होटल, रेस्टुरेन्ट, बार र पसलहरूको आगमनको साथ, धेरै एन्जेलेनोहरू DTLA को सम्पन्न छिमेकको दृश्य हेर्न हतारिरहेका छन्, तर तपाईंलाई कसरी थाहा छ कहाँ जाने? हामीले चेक आउट गर्न लायक के छ भनी पत्ता लगाउनको लागि क्षेत्रलाई स्काउर गर्यौं, र यहाँ दस चीजहरू छन् जुन तपाईंलाई थाहा नहुन सक्छ। डाउनटाउन LA.
तपाईले सोचे भन्दा धेरै सार्वजनिक कला छ.
सार्वजनिक कलाको कुरा गर्दा, डाउनटाउन LA सँग स्मारक र मूर्तिहरूको उचित हिस्सा भन्दा बढी छ जुन यात्रुहरूका लागि प्रकाशको रूपमा खडा हुन्छ। तपाईंले कला जिल्लामा प्रवेश गर्दा तपाईंले याद गर्नुहुने पहिलो कुरा सार्वजनिक कलाकृति हो - र यो जताततै छ। डाउनटाउन एउटा सार्वजनिक कलाको खजाना हो जुन भवनहरूको छेउमा विशाल भित्ति चित्रहरूदेखि लिएर झ्यालको किनार, बेन्चहरू र ढोकाहरूमा भएका साना कार्यहरू सम्म।
DownTownLA मा मुख्य सुविधाहरू
त्यहाँ एउटा गल्लीमा पत्ता लगाउनको लागि सम्पूर्ण (नि:शुल्क) संग्रहालय छ।
यसलाई ग्रैंड सेन्ट्रल आर्ट सेन्टर भनिन्छ, र यो मुख्य र स्प्रिंग स्ट्रीट र दोस्रो र तेस्रो सडकहरू बीचको गल्लीमा अवस्थित छ। यो क्षेत्र शेपर्ड फेरे र मार्क डीन भेका द्वारा काम गर्ने घर पनि हो र कलाको कारण "एली-ओप" डब गरिएको छ।
त्यहाँ एक जोडी चश्माको 140-फुट अग्लो मूर्तिकला छ।
LA मुरल विश्वको सबैभन्दा ठूलो चित्रित चश्मा हो। यो यति ठूलो छ कि तपाईले यसलाई माइल टाढाबाट देख्न सक्नुहुन्छ ... र यो भवनको छेउमा चित्रित गरिएको छ, जमिनमा भित्ता मात्र होइन! कलाकार रोबर्ट वर्गासले यसलाई 2008 मा सिर्जना गर्नुभयो।
तपाईं Urth Caffe मा आफ्नो कप कफी संगै मिठाई को एक टुक्रा पाउन सक्नुहुन्छ।
प्रत्येक डाउनटाउन स्थानले दर्जनौं पेस्ट्रीहरू र डेसर्टहरूले भरिएको डिस्प्ले केस सुविधा दिन्छ जुन तपाईंले आफ्नो खानाको आनन्द लिए पछि किन्न सक्नुहुन्छ। डोनट्स, क्रोइसेन्ट, टार्ट्स, केक, कुकीज, ब्राउनी... यदि तपाईं यसलाई खान सक्नुहुन्छ भने, तिनीहरूसँग यो बिक्रीको लागि छ!
Pixar लाई डाउनटाउन LA मन पर्छ!
हृदयस्पर्शी एनिमेटेड फिल्म "अप" एक काल्पनिक सहरमा सेट गरिएको थियो जसमा डाउनटाउन LA सँग धेरै समानताहरू छन् जसमा पर्खालहरूमा विशाल बाहिरी भित्तिचित्रहरू, भिक्टोरियन घरहरू अपार्टमेन्टमा परिणत भएका छन्, शहर वरिपरि मानिसहरू बोक्ने सडककारहरू… रातो-टाइलको छाना भएका घरहरू पनि! यो फिल्म एलए मूल निवासी पीट डक्टर द्वारा निर्देशित गरिएको थियो, जो ऐतिहासिक एन्जेलिनो हाइट्समा बस्ने धेरै ऐतिहासिक घरहरू बीचमा उनले आफ्नो परिवारको लागि "मोन्स्टर्स इंक।
डाउनटाउन LA माछा टाकोहरूको घर हो.
1970 को मध्य मा, उद्यमी राल्फ रुबियो स्यान डिएगो क्षेत्रमा आफ्नो अहिलेको प्रसिद्ध बाजा-शैली माछा ट्याको परिचय गराए, र लगभग तुरुन्तै, उनका रेस्टुरेन्टहरूले ब्लक वरिपरि रेखाहरू कोर्न थाले। 1989 मा, उहाँले Anaheim मा एक रेस्टुरेन्ट खोल्यो, र 1995 मा, उहाँ लस एन्जलस आउनुभयो। जब रुबियोको पहिलो डाउनटाउन लस एन्जलस स्थान9मा 1996 औं र हिल सडकहरूमा खोलियो, यो हिट भयो - र सांस्कृतिक टचस्टोन।
बोनस: डाउनटाउन LA पश्चिमी संयुक्त राज्यको सबैभन्दा व्यस्त व्यापार जिल्ला हो, र डाउनटाउन LA मा दक्षिणी क्यालिफोर्नियामा होटल कोठाहरूको उच्चतम एकाग्रता छ। डाउनटाउन LA को ऐतिहासिक कोर सान डिएगोको होटल सर्कल, सैन फ्रान्सिस्कोको युनियन स्क्वायर, वा सिएटलको पाइक प्लेस मार्केट क्षेत्रमा कोठाहरूको कुल संख्या भन्दा बढी होटल कोठाहरूको घर हो।
डाउनटाउन LA मूल इन-एन-आउट बर्गरको घर हो। 1948 मा, ह्यारी र एस्थर स्नाइडरले वेस्टलान र ला ब्रे एभिन्यूको कुनामा रहेको खाली लिली ट्युलिप निर्माण भवनमा सानो 10-स्टूल काउन्टरबाट आफ्ना पहिलो ग्राहकहरूलाई सेवा दिए।
सानो टोकियो डाउनटाउन LA को भाग होइन - यद्यपि यो युनियन स्टेशन र वित्तीय जिल्लाको पैदल दूरी भित्र अवस्थित छ, सानो टोकियो यसको सानो छिमेक हो। यो Little Tokyo Services Center, Inc. को एक अलग गैर-लाभकारी संस्थाको अंश हो। आज सानो टोकियो भनेर चिनिने सांस्कृतिक केन्द्र मूलतः 1887 मा जापानी नागरिकहरूका लागि एक एन्क्लेभको रूपमा स्थापना भएको थियो जो जापानबाट बसाई आएका थिए र एक समय सम्पन्न जापानटाउनको घर थियो। 1909 मा, समुदायको नाम पूर्व लस एन्जलस राखियो, र 1931 मा यो सानो टोकियो भनेर चिनिन थाल्यो। 1942 मा, जापानी अमेरिकीहरूको नजरबन्द पछि, समुदायलाई पुन: नामाकरण गरियो बोयल हाइट्स भनेर चिनियो।
डिज्नी कन्सर्ट हल एलए फिलहारमोनिकको घर हो - विश्वको सबैभन्दा प्रख्यात अर्केस्ट्रा मध्ये एक, जसको मतलब यो हो कि यदि तपाइँ शहर मार्फत आउँदै गरेको A-List संगीतकारहरू हेर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने, यो तपाईंले आफ्नो आँखा राख्नु पर्ने ठाउँहरू मध्ये एक हो।
10 फ्रीवे डाउनटाउन समाप्त गर्दैन - यदि तपाइँ कुनै तरिकाले तपाइँको डाउनटाउन LA जाने बाटोमा दस फ्रीवे छुटाउन प्रबन्ध गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ Alameda St उत्तरमा लैजान सक्नुहुन्छ जहाँ यो पाँच फ्रीवेसँग जोडिएको छ जुन तपाइँलाई डाउनटाउन बाहिर फिर्ता लैजान्छ।
ब्राडबरी भवन एक शवगृह थियो। पहिले जीर्णोद्धारकर्ताहरूले यस ऐतिहासिक भवनलाई भत्काउनबाट बचाए, यो पुलिस हिरासतबाट निकालिएपछि राज्य पहिचान वा पोस्टमार्टमको लागि पर्खिरहेका शवहरूको लागि शवको रूपमा काम गर्‍यो।
दुई पुलहरू LA नदीमा फैलिएका छन्।
यो लस एन्जलस डाउनटाउन न्यूजले रिपोर्ट गर्छ कि पहिलो स्ट्रीट ब्रिज 1913 को हो। पुललाई नदीको छेउछाउका गोदामहरूमा सामग्री पुर्‍याउन मालवाहक रेलहरूको प्रवेशद्वारको रूपमा प्रयोग गरिएको थियो। यो पुल आज पनि प्रयोगमा छ र कला जिल्लालाई लिटिल टोकियोसँग जोड्छ। दोस्रो पुल, छैटौं स्ट्रिट ब्रिजको रूपमा चिनिन्छ, 1926 मा उद्घाटन गरिएको थियो, र पुरातन रोमन एक्वेडक्ट्सले यसको वास्तुकलालाई प्रेरित गर्‍यो।
धेरै देशहरूको नजिक
LAX विश्वका धेरै देशहरू (मेक्सिको सहित) को नजिकको एयरपोर्टहरू मध्ये एक हो, यसले किफायती मूल्यहरूमा विदेश यात्रा गर्न सजिलो बनाउँछ।
डाउनटाउन LA मा उत्कृष्ट रात्रि जीवन छ.
डाउनटाउन LA मा शहरमा सबैभन्दा राम्रो रात्रि जीवन छ। बार र क्लबहरूको विविधताको मतलब त्यहाँ सधैं छनौट गर्न केहि छ, चाहे तपाईं रमाइलो नृत्य पार्टीको मूडमा हुनुहुन्छ वा साथीहरूसँग घुम्नको लागि चिसो ठाउँ। डाउनटाउन LA दिन पिउनको लागि पनि उत्कृष्ट छ।
यो कुनै गोप्य कुरा छैन कि डाउनटाउन एलए सहरका केही उत्कृष्ट रेस्टुरेन्टहरूको घर हो। दिन पिउनको लागि राम्रो ठाउँ के हो? तपाईं लंच वा ब्रंचमा क्राफ्ट बियर वा स्थानीय मदिराको मजा लिन सक्नुहुन्छ र त्यसपछि रातमा ककटेलको लागि बाहिर निस्कन सक्नुहुन्छ।